သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်အားတက်ကြွအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ? - For her Myanmar
သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်အားတက်ကြွအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
Relationships>Letters From the Heart>Motivation
ကိုယ်တော့ အကုန်လုပ်ဖူး.. 😀
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေမှ စိတ်အားတက်ကြွလာဖို့ လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို စိတ်အား တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အလုပ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပါတဲ့အချိန်တွေဆိုတာကလည်း ရှိနေတတ်ပြန်တာပဲလေ။ ဆိုတော့ စိတ်ပညာသဘောတရားနဲ့ သိပ္ပံပညာအရ စိတ်အားတက်ကြွစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အမေရိကန်စိတ်ပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (American Psychological Association) က လုပ်ထားတဲ့ Research တွေကနေ ဆွဲထုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ဒါက တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်နေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် အက်ဒ်မင်ဆို ငယ်ငယ်က စာကျက်ရမှာ အင်မတန်ပျင်းတဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ ကာတွန်းဖတ်ရတာ၊ ဝတ္ထုဖတ်ရတာတော့ အရမ်းကို သဘောကျပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် “ငါ ဒီကနေ ဒီထိ ကျက်မယ်။ ဒါရမှ ကာတွန်းဖတ်မယ်၊ ဝတ္ထုဖတ်မယ်” စသဖြင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆုပေးခြင်းပါပဲ။ အဲဒီလိုလေး ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ဆုလာဘ်လေးရှိတော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့။ လုပ်ချင်စိတ်၊ စာကျက်ချင်စိတ်လည်း အပြည့်ပဲလေ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်အားတက်ကြွချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူများကို အားပေးချင်လို့၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားမှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပေးပါ။
ဆုပေးခြင်းဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကို ၇၅%ထိ အားပေးပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ဆုရှိနေသရွေ့ စိတ်အားတက်ကြွနေပြီး ဆုပေးတာ ရပ်လိုက်ပြီဆိုရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုက ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုခု လိုချင်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကို လိုလားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ ဆုပေးခြင်းက နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
Related Article >>> သူတို့အောင်မြင်သလို ငါတို့ဘာလို့ မအောင်မြင်ရတာလဲ
၂။ ခံစားချက်တွေကို ရှာဖွေပါ။
လူတွေ ဘာကြောင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနိုင်လဲ တွေးကြည့်ရအောင်.. အမုန်းတရားကြောင့်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်လို့၊ မနာလိုလို့ စသဖြင့်သော ခံစားချက်တွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ခံစားချက်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ခံစားချက်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အက်ဒ်မင်တို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင် ခံစားချက်တွေကို ဦးစားမပေးဘဲ အလုပ်ကိစ္စတွေကိုသာ အလေးပေးဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုအတွက် ဆိုရင်တော့ ဒါက အတော်ဆိုးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပဲ ပြီးအောင်လုပ် တခြား ဘာမှမရှိ.. အမလေး.. ပျင်းစရာကြီးနော်.. ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ရှာပါ။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင်တော့ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ကို သွင်းပါ ယောင်းရေ..
ဆိုလိုတာက ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲ ကိုယ်အားကျတဲ့သူ ရှိလား? သူ့လိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ သူ့ထက်သာအောင် ကြိုးစားပါ။ မနာလိုစိတ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ်အားကျရတဲ့သူ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ချင်စိတ်က ကိုယ့်ကို ပြန်ဦးဆောင်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့မှ အားမကျဘူးဆိုရင်တောင် မနက်ဖြန် ကိုယ့်ကို ဒီနေ့ကိုယ်က အားကျနေအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး စိတ်သွင်းပါ။
Related Article >>> သဲတစ်ပွင့်လည်း လေးပါတယ်
၃။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည်တွေးတောပါ။
အကြီးကြီး အောင်မြင်မှ အောင်မြင်မှုလို့ ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်လက်လှမ်းမီတဲ့ ဘောင်ထဲက ကိုယ်ရအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ပြန်တွေးပါ။ ခုကြုံနေတဲ့ အခက်အခဲတွေက တစ်ချိန်က ကိုယ်ကြုံခဲ့ဖူးပြီးသားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခက်ကြုံနေတဲ့ အခါမျိုး၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အတိတ်က ကိုယ်လုပ်ယူခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ပြန်တွေးပါ။ အခက်အခဲတွေ ပြန်တွေးပါ။ ဒီလို အခက်အခဲမျိုးတွေတောင် ငါကျော်လာနိုင်ခဲ့သေးတာပဲ။ ဒါကို ဘာကြောင့် မကျော်နိုင်ရမလဲ။ ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေကိုတောင် ငါဖြတ်လာနိုင်သေးတာပဲ။ ခုမှ မကျော်နိုင်တော့ဘူးလား ဆိုတာမျိုးတွေးကြည့်ပါ။ အားတွေ အလိုလို ရလာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ဒီလို ကိစ္စသေးသေးလေးတွေအများကြီးကို ပုံမှန်လေး အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပြီးမှ အထက်ကို တက်လာတဲ့သူတွေက အကြီးကြီးကို တစ်ခါတည်း အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေထက် ဘဝကို ကျေနပ်အားရမှုနှုန်းက ၂၂% ပိုပါတယ်တဲ့။ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ကြိုးစားအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေဟာ နောက်ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တွေးနေတာထက် ရှေ့က လုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးပြီး အားယူတတ်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
၄။ “ဘာကြောင့်” ဆိုတာကို ပြောပြပါ။
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဒါကို ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ သိပြီးရင် ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ထပ်ပြီး သိထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့… (ကဲ.. ဒီမှာတင် ပိုသိချင်သွားပြီမဟုတ်လား.. ) လက်ရှိမှာ ဘာတွေ လုပ်နေရတယ်ဆိုတာထက် ဘာအကြောင်းကြောင့် ဒါတွေကို လုပ်နေရတယ်ဆိုတာကို သိထားခြင်းက လူတွေကို ပိုပြီး စိတ်အားတက်ကြွစေပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့.. ယောင်းက သင်္ချာကို မုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းက သင်္ချာကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဆိုရင်.. သူဘာကြောင့် သင်္ချာကို ဒီလောက် သဘောကျနေလဲ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိမှာပါပဲ။ ဒါဟာ “ဘာကြောင့်” မေးခွန်းရဲ့ အစပါ။ သူ သဘောကျသလို ကိုယ်လည်း သဘောကျနိုင်ကောင်းဆိုတဲ့ စိတ်ကတော့ ဘာကြောင့် ဆိုတာရဲ့ နောက်ကလိုက်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုပါ။ ဒါဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အရာ တစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ..
References : Time , American Psychological Association
ကိုယျတော့ အကုနျလုပျဖူး.. 😀
စိတျဓာတျကနြတေဲ့သူတှမှေ စိတျအားတကျကွှလာဖို့ လိုတာမဟုတျပါဘူး။ ဘယျသူမဆို စိတျအား တကျတကျကွှကွှနဲ့ အလုပျကို ပြျောပြျောရှငျရှငျ လုပျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျမပါတဲ့အခြိနျတှဆေိုတာကလညျး ရှိနတေတျပွနျတာပဲလေ။ ဆိုတော့ စိတျပညာသဘောတရားနဲ့ သိပ်ပံပညာအရ စိတျအားတကျကွှစမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို အမရေိကနျစိတျပညာဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျး (American Psychological Association) က လုပျထားတဲ့ Research တှကေနေ ဆှဲထုတျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော..
ဒါက တနျဖိုးကွီးတဲ့ အရာတဈခု ဖွဈနမှေ မဟုတျပါဘူး။ ဥပမာအားဖွငျ့ အကျဒျမငျဆို ငယျငယျက စာကကျြရမှာ အငျမတနျပငျြးတဲ့သူပါ။ ဒါပမေဲ့ ကာတှနျးဖတျရတာ၊ ဝတ်ထုဖတျရတာတော့ အရမျးကို သဘောကပြါတယျ။ ဆိုတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ “ငါ ဒီကနေ ဒီထိ ကကျြမယျ။ ဒါရမှ ကာတှနျးဖတျမယျ၊ ဝတ်ထုဖတျမယျ” စသဖွငျ့ စိတျပိုငျးဖွတျလိုကျပါတယျ။ ဒါဟာ ဆုပေးခွငျးပါပဲ။ အဲဒီလိုလေး ကိုယျ့ရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုအတှကျ ဆုလာဘျလေးရှိတော့ စိတျခမျြးသာတာပေါ့။ လုပျခငျြစိတျ၊ စာကကျြခငျြစိတျလညျး အပွညျ့ပဲလေ။
လုပျငနျးခှငျထဲမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယျကိုယျတိုငျ စိတျအားတကျကွှခငျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ သူမြားကို အားပေးခငျြလို့၊ စိတျဓာတျမွှငျ့တငျပေးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ကွိုးစားမှုနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ဆုလာဘျတဈခုပေးပါ။
ဆုပေးခွငျးဟာ လူတှရေဲ့ စိတျဓာတျတကျကွှမှုကို ၇၅%ထိ အားပေးပါတယျတဲ့။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကတော့ ဆုရှိနသေရှေ့ စိတျအားတကျကွှနပွေီး ဆုပေးတာ ရပျလိုကျပွီဆိုရငျ လူတှရေဲ့ စိတျဓာတျတကျကွှမှုက ရပျတနျ့သှားနိုငျပါတယျ။ အသဈအဆနျးတဈခုခု လိုခငျြတဲ့အခါမြိုးတှေ၊ အပွောငျးအလဲ တဈခုကို လိုလားတဲ့အခါမြိုးတှမှောတော့ ဆုပေးခွငျးက နညျးလမျးကောငျးတဈခုပါ။
Related Article >>> သူတို့အောငျမွငျသလို ငါတို့ဘာလို့ မအောငျမွငျရတာလဲ
၂။ ခံစားခကျြတှကေို ရှာဖှပေါ။
လူတှေ ဘာကွောငျ့ စိတျဓာတျတကျကွှနိုငျလဲ တှေးကွညျ့ရအောငျ.. အမုနျးတရားကွောငျ့၊ တဈယောကျယောကျကို ခဈြလို့၊ မနာလိုလို့ စသဖွငျ့သော ခံစားခကျြတှကွေောငျ့ စိတျဓာတျတကျကွှတတျကွပါတယျ။ ဆိုတော့ ခံစားခကျြတှကေို အာရုံစိုကျပါ။ အပွောငျးအလဲတဈခုခုကို လုပျဆောငျဖို့အတှကျ ခံစားခကျြတှကေ အရေးကွီးပါတယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အကျဒျမငျတို့ လုပျငနျးခှငျထဲမှာဆိုရငျ ခံစားခကျြတှကေို ဦးစားမပေးဘဲ အလုပျကိစ်စတှကေိုသာ အလေးပေးဆောငျရှကျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျအားတကျကွှမှုအတှကျ ဆိုရငျတော့ ဒါက အတျောဆိုးတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ တဈနတေ့ဈနေ့ ကိုယျ့အလုပျကိုယျပဲ ပွီးအောငျလုပျ တခွား ဘာမှမရှိ.. အမလေး.. ပငျြးစရာကွီးနျော.. ဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ခံစားခကျြကို ရှာပါ။ အရှငျးဆုံး ပွောရရငျတော့ ယှဉျပွိုငျလိုစိတျကို သှငျးပါ ယောငျးရေ..
ဆိုလိုတာက ဒီလုပျငနျးခှငျထဲမှာပဲ ကိုယျအားကတြဲ့သူ ရှိလား? သူ့လိုဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ။ သူ့ထကျသာအောငျ ကွိုးစားပါ။ မနာလိုစိတျနဲ့ တိုကျခိုကျဖို့ ပွောတာ မဟုတျဘူးနျော.. အဲဒီလိုမြိုး ကိုယျအားကရြတဲ့သူ ရှိနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျခငျြစိတျက ကိုယျ့ကို ပွနျဦးဆောငျသှားတတျပါတယျ။ နောကျဆုံး ဘယျသူ့မှ အားမကဘြူးဆိုရငျတောငျ မနကျဖွနျ ကိုယျ့ကို ဒီနကေို့ယျက အားကနြအေောငျ လုပျရမယျဆိုတာမြိုး စိတျသှငျးပါ။
Related Article >>> သဲတဈပှငျ့လညျး လေးပါတယျ
၃။ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ပွနျလညျတှေးတောပါ။
အကွီးကွီး အောငျမွငျမှ အောငျမွငျမှုလို့ ချေါတာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ ကိုယျလကျလှမျးမီတဲ့ ဘောငျထဲက ကိုယျရအောငျ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ပွနျတှေးပါ။ ခုကွုံနတေဲ့ အခကျအခဲတှကေ တဈခြိနျက ကိုယျကွုံခဲ့ဖူးပွီးသားလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အခကျကွုံနတေဲ့ အခါမြိုး၊ စိတျဓာတျကနြတေဲ့ အခါမြိုးတှမှော အတိတျက ကိုယျလုပျယူခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ပွနျတှေးပါ။ အခကျအခဲတှေ ပွနျတှေးပါ။ ဒီလို အခကျအခဲမြိုးတှတေောငျ ငါကြျောလာနိုငျခဲ့သေးတာပဲ။ ဒါကို ဘာကွောငျ့ မကြျောနိုငျရမလဲ။ ခကျခဲတဲ့ အခြိနျတှကေိုတောငျ ငါဖွတျလာနိုငျသေးတာပဲ။ ခုမှ မကြျောနိုငျတော့ဘူးလား ဆိုတာမြိုးတှေးကွညျ့ပါ။ အားတှေ အလိုလို ရလာပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ဒီလို ကိစ်စသေးသေးလေးတှအေမြားကွီးကို ပုံမှနျလေး အောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားပွီးမှ အထကျကို တကျလာတဲ့သူတှကေ အကွီးကွီးကို တဈခါတညျး အောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားနသေူတှထေကျ ဘဝကို ကနြေပျအားရမှုနှုနျးက ၂၂% ပိုပါတယျတဲ့။ ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ ကွိုးစားအောငျမွငျလာတဲ့သူတှဟော နောကျဘာဆကျလုပျရမယျဆိုတာကို တှေးနတောထကျ ရှကေ့ လုပျခဲ့တာတှကေို ပွနျတှေးပွီး အားယူတတျကွတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
၄။ “ဘာကွောငျ့” ဆိုတာကို ပွောပွပါ။
အလုပျလုပျတဲ့အခါ ဒါကို ဘယျလို လုပျရတယျဆိုတာ သိပွီးရငျ ဘာကွောငျ့ လုပျရတယျဆိုတာကိုလညျး ထပျပွီး သိထားဖို့ လိုပါသေးတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့… (ကဲ.. ဒီမှာတငျ ပိုသိခငျြသှားပွီမဟုတျလား.. ) လကျရှိမှာ ဘာတှေ လုပျနရေတယျဆိုတာထကျ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ ဒါတှကေို လုပျနရေတယျဆိုတာကို သိထားခွငျးက လူတှကေို ပိုပွီး စိတျအားတကျကွှစပေါတယျ။
ဆိုကွပါစို့.. ယောငျးက သင်ျခြာကို မုနျးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးရဲ့ အခဈြဆုံး သူငယျခငျြးက သင်ျခြာကို အရမျးသဘောကတြယျ။ ဆိုရငျ.. သူဘာကွောငျ့ သင်ျခြာကို ဒီလောကျ သဘောကနြလေဲ သိခငျြစိတျဖွဈမိမှာပါပဲ။ ဒါဟာ “ဘာကွောငျ့” မေးခှနျးရဲ့ အစပါ။ သူ သဘောကသြလို ကိုယျလညျး သဘောကနြိုငျကောငျးဆိုတဲ့ စိတျကတော့ ဘာကွောငျ့ ဆိုတာရဲ့ နောကျကလိုကျလာတဲ့ လှုပျရှားမှုပါ။ ဒါဟာလညျး ကိုယျ့ရဲ့ လုပျခငျြစိတျကို လှုံ့ဆျောပေးနိုငျတဲ့ အရာ တဈခုပါပဲ။
ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြအတိုငျး ဖွဈမွောကျအောငျမွငျနိုငျကွပါစေ ယောငျးတို့ရေ..
Tags: Knowledge, Motivation, psychology, Research, Science, ways
သွားပိုးပေါက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိထားရမည့် လက္ခဏာ (၉) ရပ်
Wathun December 14, 2018